बाइबल पढाइ कसरी सुरु गर्न सकिन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (क्यामरून) पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
आवरण लेख | पवित्र शास्त्रबाट कसरी अझ धेरै लाभ उठाउन सकिन्छ?
पढाइ कसरी सुरु गर्न सक्छु?
बाइबल पढाइबाट अझ धेरै आनन्द र लाभ उठाउन तपाईंलाई केले मदत गर्छ? धेरैलाई मदत मिलेको पाँच वटा सुझाव विचार गर्नुहोस्।
उपयुक्त वातावरण तयार पार्नुहोस्। शान्त ठाउँ रोज्नुहोस्। पढ्‌दै गरेको कुरामा ध्यान दिन सकियोस् भनेर ध्यान खलबलाउने कुराहरूलाई सकेसम्म टाढा राख्नुहोस्। पर्याप्त उज्यालो भएको र स्वच्छ हावा बहने ठाउँ रोज्नुहोस्। यसो गर्दा अझ धेरै लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
सही मनसाय राख्नुहोस्। बाइबल स्वर्गमा बस्नुहुने बुबा यहोवाले दिनुभएको किताब हो। त्यसैले आमाबाबुबाट सिक्न इच्छुक बच्चाको जस्तै मनोवृत्ति राखेमा तपाईंले अझ धेरै लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि बाइबलप्रति नकारात्मक भावना छ वा पहिल्यैदेखि कुनै सोचाइ बनाइसक्नुभएको छ भने त्यसलाई हटाउन कोसिस गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईंलाई सिकाउनुहुनेछ।—भजन २५:४.
पढ्‌नुअघि प्रार्थना गर्नुहोस्। बाइबलमा परमेश्वरका विचारहरू छन्‌। त्यसैले यसमा भएका कुराहरू बुझ्न उहाँकै मदत चाहिन्छ। परमेश्वरले ‘उहाँसित माग्नेहरूलाई पवित्र शक्ति दिने’ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। (लूका ११:१३) पवित्र शक्तिले तपाईंलाई परमेश्वरको विचार बुझ्न मदत गर्छ। अनि समय बित्दै जाँदा यसले तपाईंलाई “परमेश्वरका गहिरा कुराहरूसमेत” बुझ्न मदत गर्छ।—१ कोरिन्थी २:१०.
बुझ्ने उद्देश्यले पढ्‌नुहोस्। विषयवस्तु ढाक्ने उद्देश्यले मात्र नपढ्‌नुहोस्। के पढ्‌दै हुनुहुन्छ, त्यसमा राम्ररी विचार गर्नुहोस्। आफैलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्नुहोस्: ‘म जुन व्यक्तिको विषयमा पढ्‌दै छु, उसमा कस्ता गुणहरू छन्‌? यसलाई म आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्न सक्छु?’
निश्‍चित लक्ष्य राख्नुहोस्। बाइबल पढाइबाट लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने केही कुरा सिक्ने लक्ष्य राख्नुहोस्। जस्तै: परमेश्वरबारे अझ धेरै कुरा सिक्ने, अझ राम्रो व्यक्ति बन्ने, असल पति वा असल पत्नी बन्ने। अनि यी लक्ष्यमा पुग्न मदत गर्ने बाइबलका भागहरू छान्नुहोस्। *
यी पाँच सुझावले तपाईंलाई बाइबल पढाइ सुरु गर्न मदत गर्नेछ। तर तपाईंको पढाइलाई कसरी अझ रोचक बनाउन सक्नुहुन्छ? अर्को लेखमा केही सुझावहरू दिइएको छ
^ अनु. 8 बाइबलको कुनचाहिं भागमा यस्ता विषयबारे चर्चा गरिएको छ भनेर पक्का हुनुहुन्न भने यहोवाका साक्षीहरूसित मदत माग्नुहोस्।
पढाइबाट लाभ उठाउनुहोस्
हतार नगरी समय लगाएर पढ्‌नुहोस्
पढेको कुरामा डुब्नुहोस्, मनमा चित्र उतार्नुहोस्
पढ्‌दै गरेको बाइबल पदहरूको प्रसङ्‌ग बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्
पढेको कुराबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ, विचार गर्नुहोस्
बाइबल पढाइ: पढाइ कसरी सुरु गर्न सक्छु?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा सङ्ख्या १ २०१७ | पवित्र शास्त्रबाट कसरी अझ धेरै लाभ उठाउन सकिन्छ?